လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေလိုအပ်ပါသလား။ ဆက်သွယ်ရန် Law & More B.V.
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေသည်နိုင်ငံခြားသားများကို ၀ င်ခွင့်၊ နေထိုင်ခွင့်၊ နိုင်ငံခြားသားဆိုသည်မှာဒတ်ခ်ျနိုင်ငံသားများမဟုတ်သောသူများဖြစ်သည်။ ဤသူများသည်ဒုက္ခသည်များဖြစ်နိုင်ပြီးနယ်သာလန်တွင်နေထိုင်ပြီးမိသားစုဝင်များလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ကနယ်သာလန်ကိုလာပြီးအလုပ်လုပ်ချင်သူတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။
နှင့်ဆက်သွယ်ပါ LAW & MORE
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်သင်၊ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ မိသားစု ၀ င်သို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး အတွက်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် (သို့) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလျှောက်လွှာတင်လိုပါကသင့်အားကူညီပေးလိုသည်။ Law & More သင့်အားအကြံဥာဏ်ပေးနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင့်အတွက်နေထိုင်ခွင့်ခွင့်လျှောက်လွှာတစ်ခုလုံးကိုရေးဆွဲနိုင်သည်။ သင်၏လျှောက်လွှာကိုငြင်းပယ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်နယ်သာလန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်သဘာဝ ၀ န်ဆောင်မှုဌာန (IND) ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အားကန့်ကွက်ရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေတစ်ယောက်ယောက်အတွက်မေးခွန်းရှိလား။ သို့ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်စွာကူညီပေးပါမည်။
အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ပါမစ်သည်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်များမှအပကျန်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်များပါ ၀ င်သည်။ IND သည်တင်းကျပ်သောဝန်ခံချက်မူဝါဒကိုကျင့်သုံးသည်။ နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်လျှောက်လွှာကို IND ကငြင်းပယ်ရုံမျှမကအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါက။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်အမျိုးမျိုးကိုလျှောက်ထားရာတွင်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာများအတွက်လျှောက်လွှာများကိုတင်သွင်းနိုင်သည် -
• EU နိုင်ငံသားအဖြစ်နေထိုင်ခွင့်၊
•ယာယီနေထိုင်ခွင့် (MVV) ၏ခွင့်ပြုချက်။
နယ်သာလန်၌နိုင်ငံခြားသား ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး အားတရားဝင်အလုပ်လုပ်စေလိုပါသလား။ ဆက်သွယ်ပါ
သငျသညျဒတျချြနိုင်ငံသားလျှောက်ထားရန်ဆန္ဒရှိလျှင်, သဘာဝလျှောက်လွှာတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည်သဘာဝဖြစ်ခွင့်ရှိမရှိသင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲလေ့ရှိသည်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေကောင်းတစ်ယောက်၏အကူအညီသည်အရေးကြီးသည်၊ အကြောင်းမှာအခြေအနေများသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သောလျှောက်လွှာအတွက်သဘာ ၀ ကျစွာလျှောက်ထားခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်သတိပြုရန်လိုအပ်သည်။ ဒတ်ခ်ျနိုင်ငံသားဖြစ်ရန်လျှောက်ထားရန်သင်အကူအညီလိုပါသလား။ Law & More သင့်အားမှန်ကန်သောအကူအညီကိုပေးပြီးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင်သင့်အားကူညီသည်။ .
မိသားစုပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးတွင်တင်းကြပ်သောအခြေအနေများလည်းရှိသည်။ အခြေအနေတစ်ခုကိုမလိုက်နာပါကလျှောက်လွှာကိုပယ်ချလိမ့်မည်။ အောက်ပါမိသားစုဝင်များသည်မိသားစုပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသည်။
မိသားစုပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအတွက်အခြေအနေတစ်ခုမှာလျှောက်ထားသူနှင့်မိသားစုဝင်များသည်အနည်းဆုံး ၂၁ နှစ်ဖြစ်ရမည်။ အိမ်ထောင်ဖက်များ၊ မှတ်ပုံတင်ထားသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ လက်မထပ်ရသေးသောမိတ်ဖက်များနှင့်အသေးစားကလေးများအပြင်၊ တူညီသောလိင် (လက်မထပ်ရသေးသော) လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်မိသားစုပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအတွက်လည်းအရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်သည်။
သင်သည်နယ်သာလန်သို့ လာရောက်၍ ကျွမ်းကျင်သောရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတစ် ဦး အဖြစ်အလုပ်လုပ်ရန် (သို့) စီးပွားရေးဗီဇာဖြင့်အချိန်တိုလေးအတွင်းဒီမှာနေလိုပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည် ၀ န်ထမ်းများနှင့်အလုပ်ရှင်နှစ်မျိုးလုံးအားဖြစ်နိုင်ခြေများကိုအကြံပေးပြီးလျှောက်လွှာတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်ပေးသည်။
နိုင်ငံခြားသား ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး အားနယ်သာလန်တွင်တရားဝင်နေထိုင်ရန်နှင့်တရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာအဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်သောရွှေ့ပြောင်းသူတစ် ဦး အဖြစ်နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကိစ္စတွင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမလိုအပ်ပါ။ သို့သော်အခြေအနေမှာအလုပ်ရှင်သည်နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောစပွန်ဆာအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွမ်းကျင်သောရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတစ် ဦး သည် ၀ င်ငွေလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများအဖွဲ့ကသင့်အားကူညီနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်စားလျှောက်လွှာကို IND တွင်တင်နိုင်သည်။ ဒါကိုလိုချင်ပါသလား ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်ပါ Law & More.
ထို့နောက် stuur een e-mail naar +31 40 369 06 80 ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။